Chọpụta mba ole oke ifufe na-eme | Netwọk Mgbasa Ozi
Oké osimiri na Oklahoma
Oge oke mmiri ozuzo ga-ebido n'ọnwa ole na ole, ma enwere mba ndị na-akwadola ịcheta nsonaazụ ha nwere ike iweta kachasị mma. Otu n’ime ha bụ United States, mba nke ụwa ebe oke mmiri na-eme kwa afọ.
Want chọrọ ịma ihe kpatara ya?
Kwa afọ oke mmiri ozuzo dị n'etiti 1950 na 1995 si National Oceanic na nchịkwa dị elu (NOAA)
Ọ na-apụta na asụsụ okwu dị mma maka ihe ndị a ga-eme. N’ebe ugwu anyi nwere ikuku ikuku di egwu si Canada na-ezute oke ikuku di oku site na Ọwara Oké Osimiri Mexico. N'agbata ebe abụọ Osimiri Ukwuu dị larịị, ihe na-amasị oke ifufe iji mee.
Isi nsogbu ndị America na-eche ihu bụ nke a: ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ nwere ebe nchekwa iji chebe onwe ha, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oke mmiri ozuzo na-eme n'abalị, mgbe ha na-arahụ ụra, ihe na-eme ma ihe onwunwe ma mmebi anụ ahụ dị mkpa, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịhapụ ihe karịrị mmadụ iri abụọ nwụrụ.
Tornado na texas
Ha na-eme tumadi na mmiri na ọdịda, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu steeti, gụnyere: Oklahoma, Nebraska ma ọ bụ Kansas. N'ezie, a maara mpaghara a dị ka tonado agba ọsọ, n'ihi ọnụ ọgụgụ ha na-ebili kwa afọ na ebe ndị a. Mgbe ọ gwụsịrị, ọ bụ National Weather Service (NWS) ka ọ dị n’aka ịtụle ya. Nke a bụ ihe na-eme na-achọpụta oke ikuku na oke njọ nke mmebi, nke a maara dị ka Enhanced Fujita ma ọ bụ EF. Ya mere, anyị ga-enwe EF0 ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị obere mbibi ka ọ mebiri, ma ọ bụ EF5 mgbe o bibiri obodo ma ọ bụ obodo niile.
Olileanya na mgbanwe ihu igwe na ebili okpomọkụ a na-enwekarị oke ebili mmiri, na ike karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu mba nke oke ifufe na-ebukarị? Chọpụta!
yoamil leandro ortega dijo
Agwara m otu prọfesọ nke laabu physics na iutval, na-ese ikuku na-ewere dị ka ntụnye aka nke usoro ndị agha ebe ndị ọrụ ụgbọ elu na-efe efe ma na-agbakwa ọkọlọtọ, ajụjụ a bụ na ihe ọ bụla nwere ntụpọ, na-ewere iru mmiri dị ka ntụaka. Ana m ahapụrụ gị ihe, ị na-eme nke ọzọ, ahụrụ m ụmụ nwoke abụọ n'ime ụlọ ebe a na-ere ahịa na la isabelica, otu nwere uwe elu adaada, ọ bụụrụ m ndo na o nwere ngwa ọgụ, ahụrụ m ya ọzọ ma ọ dị ka nke ahụ ọ na-anya ụgbọ ala Ndị uwe ojii, ụjọ tụrụ m wee gwa nwanne m nwoke, e nwere ndị agbata obi nọ ebe a ihe ha na-eme bụ itinye m n'ụjọ, ụfọdụ na-emegbu m ma ndị ọzọ na-achọ nsogbu m.
Zaghachi yoamil leandro ortega
Gịnị bụ mmiri ozuzo uhie?